Inona avy ireo Zeros amin'ny asa Quadratic
Inona ireo Zeros amin'ny asa Quadratic?
Ny endriky ny asan'ny kadraty dia parabola. Parabola dia afaka miampita ny x -axis indray mandeha, na indroa, na oviana na oviana. Ireo tsipika manasongadina ireo dia antsoina hoe x -interceptions na zero.
Ao amin'ny pejin-tsainanao, ny asa kadraty dia feno ny x sy y . Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny fampiharana azo ampiharina amin'ny sehatra kadraty. Ao amin'ny tontolo tena izy, nosoloina fe-potoana, lavitra, ary vola ny x sy y . Mba hisorohana ny fifanjevoana, ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny nosy fa tsy x -interceptip.
Fomba efatra hitadiavana ny zeros
Fanitsiana ny kianja
Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny fampiasana grafika mba hamantarana ireo zeros. Alohan'ny hanombohanao ity lesona ity, ataovy azo antoka fa azonao antoka ny hanoritra paikady maromaro amin'ny Plane Cartesian.
Ny fiainana miainga amin'ny karamako handoavana ny karama. Marina aloha fa tsy azonao atao ny mandray anao, fa tsy mahafinaritra ny mankalaza ny voalohany sy farany amin'ny volana miaraka amin'ny sakafo Alpo sy saltines.
Tezitra tamin'io zava-nitranga io (tapa-tsinay sy nihinana sakafo alika) i Teresa, nanapa-kevitra ny handalina ny fandanjalanjany ny kaonty momba ny kaonty ao anatin'ny iray volana.
Aiza ireo zerôs amin'ity grafika ity?
Inona no tiany holazaina?
Two Zeros - valiny
1. Aiza ireo zero eo amin'ity grafika ity?
Ny zero dia hita ao (0,0) sy (30,0).
2. Inona no tiany holazaina?
(0,0): Tamin'ny fiandohan'ny volana, Teresa dia $ 0 ao amin'ny kaontiny amin'ny banky.
(30,0): Amin'ny faran'ny volana, Teresa dia manana $ 0 ao amin'ny kaontiny amin'ny banky.
Amin'ny fetibe, ny mpamboly dia mamaritra ny bisikileta Ultra Cyclone. Rehefa avy nijoro nandritra ny adiny iray i Bianca sy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy dia mipetraka eo amin'ny seza.
Rehefa miverina amin'ny dock entrée ny fiara dia misy fakantsariny manala ny mpitaingina. Avy eo dia manenjika ireo mpitaingina ny lohany.
Aiza ny zero amin'ity grafika ity?
One Zero - valiny
Rudi Von Briel / Photolibrary / Getty Images
1. Aiza ny zero amin'io grafika io?
2. Inona no dikan'izany?
Ny mpandeha ao amin'ny Ultra Cyclone Monster dia mila miteny hoe "Cheese" rehefa mandondona ny marika 5 faharoa ny dia.
Ian Cumming / Perspectives / Getty Images
Reza, mpivaro-bolamena iray, dia nanamarika fa ny vidin'ny volamena dia mitovy amin'ny asa kadraty.
Aiza ny zero amin'ireo asa ireo?
No Zeros - Valiny
Katarina Premfors / arabianEYE / Getty Images
1. Aiza ireo zero amin'ireo asa ireo?
Tao anatin'ny 14 taona, i Reza dia nanome baiko maherin'ny $ 0 ho an'ny metaly sarobidy.
Ahoana no hamaha olana amin'ny alaèdra isaky ny dingana
Inona avy ireo polinesa?
Fanampiana sy famongorana Polynoma
Aritmetika sy Geometric Sequences
Algebra: Mampiasa marika matematika
Inona avy ireo fepetra kadraty?
Fametrahana valim-panontaniana sy fanazavana
Famaranana ho an'ny famaritana Valiny dia eo amin'ny pejy faha-2 amin'ny PDF
Ny Lalàna momba ny fizarazarana
Asa fitetezana Quadratic - Fiovana ao amin'ny Parabola
Inona no atao hoe profesora adjunct?
Inona no atao hoe Verbied Transitive?
Ireo fitsipika 7 sy ny famolavolana
LL - French Pronunciation of the Double L
Inona ny Trinite Alahady?
Fandaharan'asa navoaka sy navoakan'ny mpiasa
6 Zavatra Hahafantarana Momba ny Teleskaopy Alohan'ny Hividiananao
Ny fepetra tsara indrindra momba ny Thermopylae
Ny fiheveran-tena miavosa dia mifandray amin'ny herisetra an-tokantrano
Fizarana, Township & Faritra
Fanasana ny vahoaka Black-Eyed
Inona avy ireo teny diso?
Ahoana ny fomba hamelezana ireo karazana efatra lehibe amin'ny mpanohitra amin'ny tennis
Ny fitokonan'ny vehivavy ny fitoviana tamin'ny taona 1970
Manao ahoana ny haingonan'ny fitaovam-piadiana amin'ny peniste?
Sagittarius sy Sagittarius fitiavana fifanarahana
Mihaona amin'i Mefiboseta: Zanak'i Jonatana Noraisin'i Davida
Ireo Top 40 Christian Songs tamin'ny taona 2010
Inona no andrasana mandritra ny fanadinadinan'ny ankizy?
Ny lesona azo ampitahaina amin'ny lesona
Lyle Lovett Biographie